I-OnePlus 3T iyayeka ukuthengisa ngoJuni 1 | Iindaba zeGajethi
I-OnePlus 3T iyayeka ukuthengisa nge-1 kaJuni
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwafika inethiwekhi malunga nokuba kungenzeka ukuba inkampani ye-OnePlus iyirhoxise i-OnePlus 3T yayo kwintengiso ngenxa yokufika kweemodeli ezintsha. Kule meko, imodeli ye-OnePlus 5 eyaziwayo kunye nehletywa iza kuchukunyiswa, kwaye ngetwitter kwiakhawunti yabo esemthethweni bayenze yacaca yonke into. Ke ngoku uthathela ingqalelo into yokuba sijamelene ne-smartphone enomtsalane kunye nabanye, ukuba ungomnye wabasebenzisi abebecwangcise ukuyifumana le OnePlus 3T kungekudala, eli ayiloxesha elifanelekileyo njengoko isizukulwana esilandelayo sisondele.
Ngengxaki sinokungabaza ukuba le OnePlus 5 iyakuba yile nto siyilindeleyo kwisixhobo esivela kwifemu yaseTshayina iya kuthi ifikelele kwinguqulelo yesine emva kokumiliselwa kwayo ngo-Epreli 2014 Xa wayeka eyokuqala ye-OnePlus, i-OnePlus One.Le modeli yokuqala yayisisibhengezo sokwenyani senkampani eyayisekwe unyaka nje, yenza njalo ngo-Novemba 2013 ezandleni zomphathi-mongameli we-Oppo, uPete Lau . Ngoku sinenguqulo elandelayo yale OnePlus kakhulu.
Le yi-tweet eyenziwe kwiakhawunti esemthethweni yenkampani:
Iphantse yaphela! Ungaphoswa lithuba lakho lokugqibela lokuthenga #OnePlus3T. https://t.co/BYzRM6Z7Y5 pic.twitter.com/RUdcOufXO8
- OnePlus (@oneplus) Meyi 25 ye2017
Ke into ekucetyiswayo ngoku (kunye neeveki ezimbalwa) kukugcina isipaji sigcinwe kakuhle epokothweni yakho kwaye ulinde ukubona imodeli entsha yenkampani yaseTshayina ngokuqinisekileyo engashiyi mntu engenamdla. Okomzuzwana I-OnePlus 3T iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-439 kwivenkile esemthethweni ngelixa izinto zihlala zikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-OnePlus 3T iyayeka ukuthengisa nge-1 kaJuni
IHuawei isungula iiterminal zaphakathi kuluhlu phakathi kweHuawei Nova 2 kunye neNova 2 Plus
I-Nubia Z17 ibonisa uyilo olubonakalayo olunesakhelo esincinci kakhulu